အာရှတိုက်၏ နှလုံးရောဂါကုဗဟိုချက်မ – ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြင်းပြသော ရည်မှန်းချက်
အင်စတိကျု ဂျန်တန် နီဂါရာ (IJN) – မလေးရှား၏ အထင်ကရ နှလုံးရောဂါကု ဆေးရုံ
မလေးရှား၏ အထင်ကရ နှလုံးရောဂါကု ဆေးရုံ – အင်စတီကျု ဂျန်တန် နီဂါရာ (IJN) သည် ကွာလာလမ်ပူ၏ အချက်အချာတွင် တည်ရှိပါသည်။ မလေးရှား၏ ကမ္ဘာ့အထင်ကရ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု နှလုံးစင်တာသည်လည်း အရှေ့တောင်အာရှိ ဒေသတွင်းတစ်ခုလုံးတွင် အကြီးမားဆုံးသော လွတ်လပ်သည့် နှလုံးစင်တာ ဖြစ်ပါသည်။ မလေးရှားသည် ၂၀၂၃ တွင် အာရှတိုက်၏ နှလုံးရောဂါဗဟိုချက်မဖြစ်လာစေရန် ရည်မှန်းချက် ကြီးမားစွာ ထားရှိပြီး IJN သည် မှီခိုအားထားရာနှင့် အထင်ကရ နှလုံးရောဂါကုဆေးရုံအဖြစ် ဗဟိုချက်မနေရာမှ ဦးဆောင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ နောက်တွင် နိုင်ငံ၏ ပထမတန်းနှလုံးရောဂါကု ဆေးရုံများများစွာလည်း နောက်မှ ပါဝင်ပါလိမ့်မည်။ IJN သည် မလေးရှားရှိ နှလုံးရောဂါ ကုသရေးများတွင် မတူညီသော အစဉ်အလာ သုံးရပ်ကို ထူထောင်ထားပါသည် –
i. စုစည်း ပေါင်းစပ် သွေးလွှတ်ကြောခုံး အစားထိုးခြင်း
IJN သည် စုစည်း ပေါင်းစပ် သွေးလွှတ်ကြောခုံး အစားထိုးခြင်းဟု လူသိများသော နှလုံးရောဂါကုထုံးတစ်ရပ်ကို ရှေ့ဆောင်စတင်ခဲ့သည်။ သွေးလွှတ်ကြောမဖောင်းခြင်းကို ပြင်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုသော ပရိုစီဂျာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤမကြုံစဖူး နည်းလမ်းကို အသုံးမပြုမီတွင် သွေးလွှတ်ကြောမဖောင်းခြင်းကို ခံစားရသည့် လူနာများသည် မတူညီသည့် ပရိုစီဂျာနှစ်ခုကို ပြုလုပ်ရပါသည်။ ယခုအခါတွင် လိုအပ်တာအားလုံးမှာ တစ်ခုတည်းဖြစ်လာပြီး လူနာများအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကို သိသာထင်ရှားစွာ လျော့ချနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ii. သွေးလွှတ်ကြောမကြီး အလုံးစုံ အစားထိုးခြင်း
၂၀၁၇ တွင် IJN သည် သွေးလွှတ်ကြောမကြီး အလုံးစုံ အစားထိုး ခွဲစိတ်ခြင်းကို အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် မလေးရှား၏ ဤကဲ့သို့ သဘောသဘာဝရှိသည့် ခွဲစိတ်ကုသမှုတွင် ပထမဆုံးသော နှလုံးခွဲစိတ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို ရင်-ဝမ်းဗိုက် သွေးကြောဖောင်းနေသည့် လူနာတစ်ဦးတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
iii. သွေးလွှတ်ကြောပြောင်း ခွဲစိတ်ကုသမှု
၂၀၁၉ တွင် IJN သည် နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးသော သွေးလွှတ်ကြောပြောင်း ခွဲစိတ်ကုသမှုကို ထိုနှစ်တွင် လူနှစ်ဦးအဖြစ် အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ပြီးစီးခဲ့သော ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာထဲမှ တစ်ဦးတွင် လုပ်ဆောင်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်ချင်းဆက်အမွှာတွင် သွေးလွှတ်ကြောကြီးများ နေရာမှား (TGA) ရောဂါကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းရောဂါသည် အလွန်ပြင်းထန်ပြီး ရှားပါးသည့် မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။
နှလုံးရောဂါများသည်အမျိုးမျိုးသော နှလုံးရောဂါများ၏ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အမျိုးအစားများကို နားလည်ခြင်း
အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေသော်လည်း အမျိုးအစား နှစ်မျိုးအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်ပါသည် – မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါများနှင့် ရရှိလာသည့် နှလုံးရောဂါများ
i. မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါများ
မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါများသည် မွေးကတည်းက ပါလာသော နှလုံးချွတ်ယွင်းချက်များကြောင့် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်းကို အများအားဖြင့် မသိရှိရပါ။ နှလုံးဖွဲ့စည်းပုံ ချွတ်ယွင်းချက်များသည် နှလုံးမှတစ်ဆင့် ပုံမှန် သွေးစီးဆင်းမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုင်သော် ချွတ်ယွင်းချက်သည် နှလုံးနံရံ၊ နှလုံးအဆို့ရှင်များနှင့် နှလုံးအနီးရှိ သွေးလွှတ်ကြောများနှင့် သွေးပြန်ကြောများမှ စ၍​ အားလုံး ပါဝင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ မွေးရာပါနှလုံးရောဂါတွင် အဆုတ်နှင့် နှလုံးသွေးကြောကို ဆက်ထားသည့် သွေးကြော ပွင့်နေခြင်း (PDA)၊ သွေးလွှတ်ခန်းကြားအကာ ချွတ်ယွင်းချက် (VSD)၊ သွေးဝင်ခန်းကြား အကာ ချွတ်ယွင်းချက်နှင့် နှလုံးချို့ယွင်းချက်လေးခုပါ ရောဂါတို့ ပါဝင်ပါသည်။
ii. ရရှိလာသည့် နှလုံးရောဂါများ
မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါများနှင့် မတူညီဘဲ ရရှိလာသည့် နှလုံးရောဂါများသည် လူတစ်ယောက်၏ တစ်သက်တာအတွင်း အချိန့်အချိန်များတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြေအနေများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ရရှိလာသည့် နှလုံးရောဂါများသည် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်း အစရှိသည့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်စေသော လှုပ်ရှားမှုနည်းသည့် လူနေမှုပုံစံနှင့် အကျင့်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာလေ့ရှိပါသည်။ ရရှိလာသည့် နှလုံးရောဂါများတွင် နှလုံးသွေးကြောရောဂါ (CHD)၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း (မမှန်ကန်သည့် နှလုံးခုန်နှုန်း)၊ နှလုံးရုတ်တရက် ဖောက်ပြန်ခြင်းနှင့် နှလုံးအားနည်းခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
နှလုံးရောဂါများသည် အသက် ၃၀ ကျော်အထက် သူများကို ဒုက္ခပေးလေ့ရှိသော်လည်း ၎င်းသည် အသက် ၃၀ အောက်ရှိသော သူများကိုလည်း ချွင်းချက်မပေးပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးအကြောင်းကို ပိုမိုနားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ​နှလုံးကို မှန်မှန် သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါများသည် သင့်အား မည်သည့်အခါမှ အမှတ်တမဲ့ စွဲကပ်ဝင်ရောက်မလာနိုင်သည်ကို သေချာစေပါသည်။ နှလုံးရောဂါများဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည့် တွေ့ရများသည် လက္ခဏာများမှာ နှလုံးခုန်နှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ ပုံမမှန် မောပန်းခြင်း၊​ ဝမ်းဗိုက်အထက်ပိုင်းတွင် ဆက်တိုက် ပူလောင်မှု ခံစားရခြင်းနှင့် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း သို့မဟုတ် တင်းကြပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
နှလုံးရောဂါကုထုံးများမှ မည်သည့်အရာကို မျှော်လင့်နိုင်သနည်း
နှလုံးခွဲစိတ်မှုတွင် မှားယွင်းမှုအတွက် နေရာမရှိပါ။ ထို့ကြောင် တိကျသော ရောဂါတစ်ခုကို သိရှိရရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက်များစွာအတွက် သင့်အနေဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက အခြေအနေကို ကောင်းမွန်လာစေရန် စောစီးစွာ နှလုံးခွဲစိတ်ခြင်း (ထိုးဖောက် သို့မဟုတ် ထိုးဖောက်ခြင်းမရှိ) ကို ဆောင်ရွက်ရပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းသည် ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ဆေးရုံတွင် ပိုမိုကြာရှည်စွာ နေရနိုင်ပါသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသည် နှလုံးကုထုံးများအားလုံးတွင် ကြီးမားသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။
မလေးရှားရှိ နှလုံးရောဂါ ကုသမှုများ
အောက်ပါတို့သည် မလေးရှား၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အံ့ဖွယ်ဆရာဝန်များမှ အထူးကျွမ်းကျင်သော ပရိုစီဂျာများထဲမှ အချို့ ဖြစ်ပါသည် –
i. နှလုံးသွေးကြော ဖြတ်ဆက် အစားထိုးခြင်း (CABG)
CABG သည် ပြင်းထန်သော နှလုံးသွေးကြောရောဂါ (CHD) ကို ကုသရာတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး နှလုံးကို သွေးစီးဆင်းမှု အားကောင်းစေသည့် ထိုးဖောက်ကာ နှလုံးဖွင့် ခွဲစိတ်ကုသမှု အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အသုံးပြုမှုအများဆုံး အမှန်ကန်ဆုံး နှလုံး ခွဲစိတ်ကုသမှုများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ii. အရေပြားဖောက် သွေးလွှတ်ကြောမှတစ်ဆင့် နှလုံးသွေးကြောပြုပြင်ခြင်း (PTCA)
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ တိုးတက်လာခြင်းနှင့် အတူ ထိုးဖောက်မှုအနည်းဆုံး ပရိုစီဂျာများ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီး PTCH သည် ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ပိတ်ဆို့နေသော နှလုံးသွေးလွှတ်ကြောများကို ကုသရန် အသုံးပြုသော ထိုးဖောက်မှု အနည်းဆုံး ခွဲစိတ်ကုသမှု ပရိုစီဂျာ ဖြစ်ပါသည်။
iii. အရေပြားဖောက် နှလုံးသွေးကြော ပြုပြင်ခြင်း (PCI)
စတန့်ထည့်၍ သွေးကြောပြုပြင်ခြင်းဟုလည်း သိရသော PCI သည် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ (အဖတ်များ စုပုံလာခြင်းဖြင့် ကျဉ်းမြောင်းလာသော နှလုံးသွေးကြော) ကို ကုသရန် အသုံးပြုသော ထိုးဖောက်မှုအနည်းဆုံး ခွဲစိတ်မှုမပါသည့် ပရိုစီဂျာတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ချူပြွန်ဟု သိရသော သေးငယ်ပျော့ပြောင်းသည့် ပြွန်တစ်ခုကို အသုံးပြုပါသည်။ စင်တာအများစုသည် အမေရိကန်နှလုံးအသင်း (AHA) ၏ ထောက်ခံနှင့်အညီ မိနစ် ၉၀ အတွင်း ၎င်းကို အပြီး လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အင်စတီကျု ဂျန်တန် နီဂါရာ (IJN) တွင် ၎င်းကို လူနာ ခွဲစိတ်ခန်း (OT) ထဲသို့ ရောက်ရှိမှ စတင်၍ ၄၅ မိနစ်အတွင်း အပြီး လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးနှင့် ကုသရေး ရည်ရွယ်ချက် နှစ်မျိုးလုံးအတွက် အသုံးပြုသည့် နှလုံးသွေးကြောဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းသည် သွေးလွှတ်ကြောစနစ်တွင် ပိတ်ဆို့ထားသည်များကို သုံးသပ်အကဲဖြတ်ရန် အသုံးပြုသော ဓာတ်မှန်ရိုက် ပရိုစီဂျာတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ခွဲခြားမြင်နိုင်သည့် အေးဂျင့်တစ်ခုဖြစ်သည့် အိုင်အိုဒင်းဆိုးဆေးကို ပရိုစီဂျာ မစတင်မှီတွင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့ ထိုးထည့်ရပါသည်။
v. နှလုံး-ရင်ခေါင်း အထူး ခွဲစိတ်ကုသခြင်း
၎င်းသည် ရင်ခေါင်းအတွင်းရှိ အဆုတ်၊ အစာရေမြိုပြွန်နှင့် သိုင်းမတ်စ်ဂလင်း အစရှိသည့် ကိုယ်အင်္ဂါများနှင့် သက်ဆိုင်သော ခွဲစိတ်မှု အထူးကုပညာတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ဤခွဲစိတ်ကုသမှု၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ကိုယ်အင်္ဂါကူးစက်ရောဂါများကို ကုသရန်နှင့် ရင်ခေါင်းတွင်းရှိ အကြိတ် သို့မဟုတ် ကင်ဆာများကို ဖယ်ရှားရန် ဖြစ်ပါသည်။
နှလုံးရောဂါကု နေရာဌာနများကို ရှာဖွေပါ